Amaphrojekthi Wokukhiqiza - I-BXL Creative Packaging
Izimonyo Ukudla Utshwala Ubucwebe Amakha Ikhandlela Elinamakha
I-BXL Creative isebenza ngezinto ezintsha, izakhiwo ezintsha nobuchwepheshe obusha, njenge-anti-mbumbulu, i-3D UV, i-3D embossing, iphethini ye-optical grating, nama-inks we-thermochromic njll, ekwakhiweni kokupakisha kwezimonyo nokukhiqiza, okwenza kube luhlobo oluthile .
Ngasikhathi sinye, ukupakisha okulungele imvelo nakho kuthatha ingxenye enkulu. I-BXL yenza umsebenzi omuhle wokulinganisa ukwakheka kokubukeka kwephakeji, ukusebenza nezidingo zayo ze-eco.
I-BXL Creative inikeza okokusebenza kwebanga lokudla, izixazululo zephakeji ezivunyiwe yi-FDA & zamakhasimende aphezulu wokudla ezifuywayo naphesheya Ngenkathi ufinyelela ukubukeka kwephakeji kanokusho, i-BXL ayiyekethisi ekukhathazekeni kokuphepha kokudla.
Ukupakisha kwewayini nemimoya kungenye yebhizinisi eliyinhloko le-BXL. Ikakhulukazi emakethe yase China yasekhaya, i-BXL Creative ingenye yezinkampani nabakhiqizi bephakeji abaziwa kakhulu, enikeza amaklayenti izixazululo zemikhiqizo yokhiye wokujika, ehlanganisa ukudala umkhiqizo omusha ngokuphelele ocwaningweni lwemakethe, ukucabanga, ukuqamba igama, ukuma komkhiqizo, ukumaketha amasu, ukwakhiwa kwesitolo, ukwakheka kwephakeji, ukwakheka kwencwajana, njll.
Njengamanje, ama-80% wemikhiqizo yokupakisha yobucwebe yenkampani ithunyelwa eYurophu naseNyakatho Melika. Ngolwazi olucebile lokuthekelisa imisebenzi nokuphathwa kwephrojekthi ye-OEM & ODM, i-BXL ingahlangabezana nazo zonke izidingo zokupakisha zamakhasimende.
I-BXL Creative inezinhlobo ezahlukahlukene zebhizinisi lokupakisha okunethezeka, lapho amakha / iphunga elingenye yezingxenye eziyinhloko. Amakhasimende ikakhulukazi avela eYurophu, eNyakatho Melika, eMid-East, e-Australia, njll.
I-BXL Creative inesipiliyoni seminyaka eminingi ekukhiqizeni ukufakwa kwamakhandlela anamakha omhlaba, selokhu kwaqala ibhizinisi layo lamazwe omhlaba. Kuze kube manje, amaklayenti afaka iningi lemikhiqizo eyaziwa kakhulu embonini.
Iqhwa Leqhwa Elincane Elincane
Ingakwazi ukufeza ukuqeda iqhwa leqhwa. Uma ihlanganiswe nomklamo wezithombe, ingakha ukubukeka okuhlukile kwe-deco.
Inembe kakhulu futhi inembile kunesitembu esivamile esishisayo. Le deco yenzelwe ngqo imigqa emincane kakhulu, emincane, amachashazi, izinhlamvu namaphethini, angenziwa ngesitembu esishisayo. Ingafinyelela ekugcineni kwesitembu se-foil ngesikhundla esisebenza kahle futhi esinembile. Iqokomisa ubumnandi bephethini, ubuhle, ubuhle, izingqimba eziningi nokuthakazelisa.
Le nqubo itholakala ngokuhlanganisa isikrini sikasilika nesitampu esishisayo. Iletha kahle i-deco yokuthungwa ngokuqedwa kwensimbi, okunika i-patten ukuthungwa kwensimbi, okuletha umthelela onamandla wokubuka nokubukeka kwensimbi ye-3D.
Lapho i-UV UV ihlangana nomphumela we-3D, iletha ukuthinta okuhle nomthelela wokubuka.
Ukwenza umphumela oguqukayo, ukuthola umthelela wokubuka onamandla.
Ngokucindezelwa ukushisa, amaphethini nolayini kuguqulwa kubhalwe ephepheni, kuguqulwe umbala wephepha ukwenze ukukhanya okukhanyayo nomthunzi kumbala wephepha ongemuva, okuqinisa ukuthungwa nokuzwakala kwephakeji.
I-Embossing engaphezulu ejulile ye-3D
Ngamaphethini namagrafu afisa ukufeza isendlalelo sokuqeda se-emboss se-3D ngongqimba futhi adale umthelela wokubuka oqinile, iBXL Creative nakanjani ingakwenzela yona.
Embossing Ucwecwe Iphepha Ilebula esikhundleni ilebula metal
Amaphethini omugqa wokukhanya onomugqa ogqamile nowokuvezanayo futhi i-handisis ekhishwe ezintweni ezijwayelekile ezihlanganisiwe zamaphepha ngokusebenzisa inguqulo ekhethekile yomugqa wokukhipha ukukhiqiza ukuthungwa okucebile, ubumnandi nokuqukethwe okuningi, ngakho-ke ukuthungwa kwensimbi okunamandla kakhulu nomthelela wokubuka.
Kwenziwe ngentando Iphethini Ukuthungwa
Le nqubo ifinyelelwa ngokufakwa embossing. Ukukhethwa okungahambelani kwemigqa ehlukahlukene kungenziwa ukufanisa phezulu. Ngokwenqubo ebonakalayo, isithombe silawulwa ukucabanga ukuphazamiseka kwezinhlangothi ezintathu nemigqa yephethini ecacile, kuveza ubuhle, ukungafani okucacile nokuzizwa kwesandla esihle ukugcizelelwa kwemigqa yayo yangempela yokubala inemibala futhi inomthelela oqinile wokubuka.